I-China Felt coasters & i-placemats fektri kunye nabavelisi | Huasheng
Into Mamela ii-coasters & placemats
Isixhobo Iipesenti ezingama-100 zoboya begusha
Ubungakanani I-4x4 '', okanye ehleliweyo
Umbala Umbala wepantone
Imilo Umjikelo, hexagon, isikwere, njl.
Iindlela zokuqhubekeka Ukufa ukusikwa, ukusikwa kwe-laser.
Inketho yokuprinta Ukuprinta okushicilelweyo kweSilkscreen yedijithali yokuprinta
Inketho yokhetho Iskena se-Laser, isilika, iilebheli ezilukiweyo, ufele lwesikhumba, njl.
I-100% yoboya bethu buvakala ikwasisibonelelo sendalo, esinokuphinda sisebenzise oko kuthetha ukuba asinazixhobo zetyhefu zinetyhefu. Luhlobo oluzinzileyo, olunokuthi luhlawulwe biodrafti enokubakho kwikhaya elinomtsalane ku-eco.
[Intle kwaye ithambile]
Yenziwe ngoboya be-merino ethambileyo, i-coasters yethu yesiselo ithambile kwindawo yakho kwaye ibonelela ngendawo yokuthambisa iglasi okanye ikomityi yakho. Ayizukudala monakalo njenge marble okanye ilitye ukuba iwile ngengozi.
[Inyebile kwaye yomelele]
Uboya be Merino buziva bohlukile kuba yenziwe ngeefayile ezilungileyo kakhulu kunye nezithambileyo ezixinaniswe ngokuqinileyo phantsi kobushushu obukhulu kunye noxinzelelo. Iziphumo ezivokothekileyo zisixinene, zixinene kwaye aziyi kuba dent, zikhuphe okanye zaphule.
Iipads zoCoaster zeWoolen lukhetho oluNANDI. Ziyakwazi ukuvuseleleka kwaye zinokuphinda zibekhona. Uboya bude bunepropathi ye-ANTI-BACTERIAL ngenxa yobukho bendalo ye-lanolin.
Ngethamsanqa uboya bendalo buchasene nobumdaka kunye namabala. Njengayo nayiphi na into ekhayeni lakho, iya kufuna ukucocwa ngamanye amaxesha. Inyathelo lokuqala elifanelekileyo iya kuba kukuzama ukucoca ngendwangu emanzi. Banokukhutshelwa ngamanzi apholileyo besebenzisa izixhobo zokucoca ezithambileyo kwaye emva koko babekwe phantsi ukuze bome. Ezi zinto zenziwe nge-100% ye-merino yoboya ukuze le nkqubo ifane nokukhathalela impahla yoboya esemgangathweni.
Uboya bukwayiqhela yodwa imbuyekezo. Ukufuma kufakwe kwiifayibha zoboya be-coaster-kushiya ifanitshala yakho ikhuselekile ekonakaleni (kunye nekharavani yakho ingabambelele kwiglasi yakho).
Edlulileyo: Qhobosha isitshixo senqanawa
Okulandelayo: Thambisa isityalo